अपेक्षा र माग « प्रशासन
अपेक्षा र माग
हर्क बहादुर र दिलमायाँ औधी खुसी छन् अचेल । उनीहरूले सोचेकै थिएनन् कि कुनै जमानामा उनीहरूको एकलौटो छोरोले स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गर्ला । होओस् पनि कसरी ? बुढाबुढी नै मुखियाबाकहाँ गोठालो बसेकै भरमा अलिकति पाखो बारी र एउटा झुप्रो त जोडे तर शहरमा राखेर कसरी पढाउन सकुन् छोरोलाई ।
अजिंगरको आहारा दैबले पुर्याउने कुरामा विश्वास भयो हर्कबहादुरका दम्पतिलाई । एस्.एल्.सी.सम्म जसोतसो गाउँमै सकेको छोरो दिनेशले लगालगी छात्रवृत्ति पाएर प्रमाणपत्र, स्नातक हुँदै स्नातकोत्तर तह नै पास गर्यो । त्यो पनि इन्जिनियरिंगमा । झ्याप्प जागीर पनि मिलिगयो । साट्सुट्ट बिहे पनि भैहाल्यो । हिजोसम्मका गोठालो बसेको परिवार आज सम्पन्न बुहारीका सासू–ससुरा भए उनीहरू ।
स्वभाबिक हो, दिनेशसँग सबैका आ–आफ्ना अपेक्षा थिए ।
‘हाम्रो गाउँकै पहिलो इन्जिनियर, तिमीले गाउँको विकासमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ ।’ गाउँलेहरू भन्थे ।
‘यत्रो उमेरसम्म त अरूकै खेत जोतियो । अलिकति भने पनि पानी लाग्ने जमीन किन्न पाए हुन्थ्यो बाबू !’ बेलाबेलामा छोरालाई सम्झाउँथे हर्कबहादुर ।
‘यसो ककक नाकमा कानमा र एउटा बेरूवा औंठीको रहर छ बाबू, सकिस् भने ल्या है !’ दिलमाया मौका पाएका बखत छोरालाई कोट्याइरहन्थिन् ।
दिनेश भने पुरानो बटनवाला मोबाइल बोक्दै थियो अझै पनि । शहरमा घडेरी जोड्नु, घर बनाउनु, गाडी किन्नु, आदि इत्यादि कहिले हो कहिले !
जे भए पनि यी सबै थिए कम प्राथमिकताका कुरा । सबभन्दा चोट्टे अपेक्षा र माग त उसकी श्रीमतीको पो थियो त । उनी अचेल दैनिकजसो एउटै कुरा दोहोर्याइरहन्छिन् ‘यहाँ बसेर कामै छैन भन्या दिनेश ! यसो बुझ न गतिलो कन्सल्ट्यान्सी कहाँ छ । बिदेश त जसरी पनि जानै पर्छपर्छ ।’
Tags : लघुकथा